Manomboha ny blôginao manokana: Tips Van Semalt
Ny fitorahana bilaogy iray amin'ny tranonkalanao ho an'ny olona manokana dia mahasamy hafa, na dia lehibe aza ianao ka mahazo ny votoatin'ny tranonkala. Izy dia nahatonga olona maro ho lasa mpitoraka bilaogy. Tadiavo ny momba ny zava-dehibe dia manana ny blôginao manokana
Ny fanoherana dia eny. Lisa Mitchell, ny Customer Success Manager Manager Semalt Dieny Digital, no antony mahatonga anao ho mpilalao blogs ary inona no azonao atao mba hanorenana bilaogy mahomby.
Ny Content Marketing dia lasa tafahoatra
Ireo manam-pahaizana manokana dia manana ny lanjany manokana amin'ny fampiroboroboana ny fampiroboroboana ny fampiroboroboana ny tsy fahampian-tsakafo, ny fanodikodinana ny nep-inhoud ary ny firongatry ny teknolojia bebe kokoa. Na izany aza anefa, ny olona dia efa miha-henjana hatrany. Ao anatin'ny SEO ao anaty tetik'asa votoatin-javatra dia heverina fa zava-dehibe ny fiovaovana, fa ny fidirana dia mbola zava-dehibe. Ny fampitahana dia ny fomba amam-panao entina hampitomboana sy hampifanaraka azy.
Ny olona rehetra dia manao izay hahatonga ny marika rehetra hikapoka azy, fa ny ankamaroany kosa dia mahazo ny bilaogy vaovao. Azonao atao ny mandray anjara eto amin'ny Wikipedia amin'ny alàlan'ny fanitarana azy. Jereo koa ny pejy Ahoana ny manao takelaka rehefa te-hijery hoe ahoana no fanaovana azy. Ary dia misy koa ny fanaraha-maso ny fanaraha-maso vaovao amin'ny famoronana vaovao vaovao. Ny bilaogy dia tsy voafetra ho an'ny zavatra ataonao.
Noho ny aterineto dia miezaka misimisy kokoa momba ny tontolo vaovao, ny vahoaka ihany koa dia hitombo. Izany no mahatonga ny mpisera hanohy tsy tapaka. Amin'izao fotoana izao, amin'ny fironana vaovao no miseho isan'andro, ny fisian'ny vondron'olona samihafa
Ny fampidinana ny bilaogy dia mora sy mora, indrindra indrindra ny fitantanana ny tranonkala fitantanana Content ho an'ny Joomla amin'ny WordPress. fanombohana (nitranga in-1)
Inona no tokony hanombohana
Amin'ny fanombohana ny famolavolana tetik'asa ara-barotra vaovao ho an'ny votoatiny, dia manomboka ny safidy kokoa. Ny dingana voalohany dia sarotra indrindra, nefa tsy mety hitranga izany raha vao manomboka. Ampiasao ireo torohevitra manaraka:
Manorata penina sy taratasy ary soraty izay hahitanao ny blaoginao ary eo am-pelatananao ny sora-tànana. Tsy mety ny manaraka ny tsara indrindra ho an'ny roa tonta, fa ny mpanoratra ihany koa dia manaparitaka ny heviny momba ny fampiasana sy ny fanatsarana.
Rehefa nanadihady momba ny fikarohana bilaogy ao anatinao ianao, izay noheverin'ny mpamaky sy ny zavatra hafa ataonao. Amin'ny fampiasana ny fitaovam-pandraharahana dia mandray ny fototra iorenanareo ny fifaninanana fifaninanana.
Enregistrer un domeinnaam
Arakaraky ny fisainana an-tsaina sy ny fahaiza-mitarika amin'ny paikady, dia ahafahanao miala amin'ny sehatra ara-toekarena iray amin'ny mpiara-miombon'antoka ara-drariny mba tsy hialana voly.
Ny zavatra manaraka tokony hataonao mba hahazoana ny tranonkala, dia ny plana alemana no manova ny tranokalanao. Ny tombony dia ny SEO amin'izao fotoana izao no maka ny seo ary manaraka anao. Pejy an-dalana voatonona, lohatenim-pejy ary pejy URL.
Mifandraisa aminay ny media sosialy
Ny famoronana sehatry ny fampahalalam-baovao ara-tsosialy dia fomba lehibe ahafahan'ny mpikamban-dRavalomanana vaovao, manaparitaka ny heviny ary ny adiresy.
Miezaha hahatratra ny tanjona
Mitadiava sarin-teny ho an'ny lahatsoratra izay tokony aloanao, azonao atao ny te-hitombo sy hiantsoana anao ary inona no fampahafantarana ny fampielezan-kevitra ho anao. Miezaha mba ho afaka hanaraka an'io tetika io ary ampidino ny fahatapahan-kevitra rehefa manomboka.
Soraty eto ny lahatsoratra voalohany
Rehefa avy namaky ny lahatsoratra nosoratany voalohany dia ho mora aminao avokoa ny zava-drehetra. Ny lehibe indrindra dia ny mianatra matetika sy miasa amin'ny bilaogy Source .